ကလေးလိုချင်လို့ပါ . . . – Healthy Life Journal
ကလေးလိုချင်လို့ပါ . . .
Posted on မေ 14, 2019
မေး ။ သမီးအသက် ၂၅နှစ်ပါ၊ အိမ်ထောင်ကျတာ ၅ လရှိပါပြီ။ အခု ကလေးလိုချင်လို့ပါရှင်။ ပထမ ၁လ ကို ဆေးကတ်သောက်ပါတယ်၊ ရာသီလာပါတယ် ဆရာ။ ဒုတိယ ၁လကို ၃လခံတားဆေး ထိုးလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ ထိုးလိုက်တဲ့ ၁၂ပတ်အတွင်း ရာသီလုံးဝ မလာပါဘူးဆရာ။ ပြည့်သွားပြီး အခု ၁လခွဲကြာမှာ ရာသီလို သွေးညိုအခဲနည်းနည်းဆင်းတာ ၃ရက်ရှိပါပြီ ဆရာ။ ခါးကိုက်တာ၊ ဆီးစပ်နာတာတော့ ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။ သွေးညိုဆင်းတာ နည်းနည်းလေးပါပဲ။ အဲဒါ အမျိုးသားနဲ့ အတူနေရင် ကလေးရနိုင်မလား သိချင်လို့ပါဆရာ။
Lwin Lwin (FB)
ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ ။ ၃လခံထိုးဆေးက ရာသီတွေ မလာတာ မမှန်တာတွေ၊ ရပ်လိုက်ရင် ချက်ချင်း ကလေးမရတတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၆လလောက်တော့ စောင့်ရတတ်တယ်။ နေ့စဉ် ဖောလစ်အက်ဆစ် ၁လုံး မှန်မှန် သောက်ပါ။ တစ်ပတ်ကို ၂-၃ကြိမ် အတူတူနေပါ။ ကလေးရမှာပါ။
Related Items:Baby, Pregnancy
ကလေးမွေးပြီးနောက် အရင်လို ကိုယ်လုံးအချိုးအစားပြန်ရဖို့ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ
ကိုယ်ဝန်နှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးတို့ သိသင့်သည့် အချက် ၅ ရပ်
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျတှငျ ဘဝတှငျကနြေပျစှာနတေတျစရေနျ သိသငျ့သော အခကျြ ၈ ရပျ